အပြာရောင် Whale ဂိမ်းကဘာလဲ? 50 နေ့ရက်များစိန်ခေါ်မှု (Suicide ဂိမ်း) ကို Download လုပ်ပြီး Install - Blue Whale APK Download
အပြာရောင် Whale ဂိမ်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက် (Blue Whale Game)
အပြာရောင် Whale ဒါဟာအရာတစျခု 50 Levels နဲ့တစ်ဦးစုစုပေါင်းလည်းမရှိတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုအိန္ဒိယ, တရုတ်, ချီလီ, ကင်ညာ, ဥရုဂွေး, ဗင်နီဇွဲလား, ဘရာဇီး, ရုရှားအဖြစ်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများအတွက်ပြည်သူ့စာရေးနေဖြင့်ကစားသောလူကြိုက်များတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါအပြာရောင် Whale စိန်ခေါ်မှုဂိမ်းအနိုင်ရဖြည့်စွက်ဖို့ရှိပါတယ်။
တိုင်းတာဝန်ပြီးစီးရဲ့အဆုံးမှာတစ်ဦးချင်းစီနှင့်တိုင်းတာဝန်အားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့သောအပြာရောင် Whale ဂိမ်းတစ်ခုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရှိပါသည်။ ဒါဟာ 50 အဆင့်ဆင့်စုစုပေါင်းရှိပြီးတိုင်းတာဝန်ပြီးစီးသည်ဂိမ်း Enhancer များ၏အခက်အခဲပြီးနောက်။
လူတိုင်းကဒီအပြာရောင် Whale ဂိမ်းအများအပြားသေကြောင်းကြံစည်မှုအမှုပေါင်းရှိပြီးကြောင့်ဂိမ်းဟာလူ့အဖွဲ့အစည်းမရှိတန်ဖိုးကိုရှိသူတို့ကလူသန့်ရှင်းရေးသို့မဟုတ်သတ်အံ့သောငှါထားအဖြစ်က၎င်း၏စည်းရုံးရေးမှူးရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုသိရသည်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
အပြာရောင် Whale ဂိမ်းဟာလုံးဂိမ်းပြီးပါကပြီးနောက်သင်ပေါင်း 100 မှတ်ပေးပါသည်။ လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဘဝကိုအန္တရာယ်ဇုန်ထဲမှာရှိနိုင်ပါသည်သောအန္တရာယ်ရှိအလုပ်များကိုစာရေးတံပြုပါရန်ရှိသည်။
ဒါကအပြာရောင် Whale ဂိမ်းထိုကဲ့သို့သောဂီတနှင့် 50 အဆင့်လူမျိုး၏နောက်ဆုံးမှာနားထောင်ခြင်းသတ်သေကျူးလွန်စေခြင်းဖြစ်သည်, ညမှာပါ, Movies အကဲခတ်ညမှာသင်္ချိုင်းမှ Going နှင့် Selfies တာ, ညမှာနှိုးအဖြစ်အများအပြားတာဝန်များကိုပေးပါသည်။ ပြည်သူ့ဒီဂိမ်းထဲကနေဝေးနေဖို့သင့်တယ်, ဒီဂိမ်းကိုလူများ၏ဘဝ့ဝှက်ချက်များကိုပျက်စီးစေပြီးတော့သတ်သေဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကအဖြစ်လုံခြုံဖြစ်သင့်သည်။
ပြည်သူ့လည်းသူတို့စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ကပေးသောလျှောက်လွှာကို install ရန်ရှိသည်ဟုပြောနှင့်များစွာသောအခြားလူများကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူထိတွေ့ရနိုင်ပါလိမ့်နိုငျသောအားဖြင့် Facebook က, Instagram ကိုကဲ့သို့လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများမှတဆင့်ကြောင်းကိုပြောပြ ။
ရုရှားနိုင်ငံမှာတော့ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုရုရှား, အိန္ဒိယ, တရုတ်, ချီလီ, ဘရာဇီး, ဘူလ်ဂေးရီးယား, ဥရုဂွေး, အာဂျင်တီးနား, ဗင်နီဇွဲလားအဖြစ်အများအပြားနိုင်ငံများအတွက်အသေခံသောသူသည်များစွာသောလူ, လုနီးပါး 130 ပြည်သူ့ဒီအပြာရောင် Whale ဂိမ်းကစားခြင်းအားဖြင့်ကြောင့်သေကြောင်းကြံစည်မှုဖြစ်ပွားသူမှစုတေ့ရှိပါတယ်။
သင့်ရဲ့ကလေးအပြာရောင် Whale (Suicide ဂိမ်း) Playing ကြောင်းလက္ခဏာများ
အစိုးရကဒီအပြာရောင် Whale ဂိမ်း၏စည်းရုံးရေးမှူးအပေါ်လုပ်ရပ်များယူထားပြီးသူရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ အစိုးရယခုဘယ်သူမှမဆိုနိုင်ငံ၌ဤအပြာရောင် Whale ဂိမ်းကစားနိုင်တော့မည်နိုင်သည်ကိုသေချာစေရန်ဒီအပြာရောင် Whale ဂိမ်းပိတ်ပင်ရန်လည်းအပေါငျးတို့သ Website များအနေဖြင့်အပြာရောင် Whale ဂိမ်းအပေါငျးတို့သ APK ကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားနေသည်။
ဒါကြောင့်တင်းကျပ်စည်းမျဉ်းများနှင့်နေရာတိုင်းမှာအပေါငျးတို့သက်ဘ်ဆိုက်များမှအနေဖြင့်ဂိမ်းပပျောက်ရေးဖို့အစိုးရကလုပ်ခဲ့ကြသည်။ လူအပေါင်းတို့သည်မိဘများဟာသူတို့ရဲ့ကလေးဟာအပြာရောင် Whale ဂိမ်းကစားခွင့်မရသဖြင့်၎င်းတို့၏ကလေးစောငျ့ရှောကျဖို့အတှကျဒါဟာမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
မိဘများကအမြဲတမ်းသူတို့ဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်လည်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. နေသောလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်. ကလေးစစျဆေးသငျ့သညျ။ ပြည်သူ့အရာအားလုံးနှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏ကလေးများနှင့်အတူမွေးမွနျးသငျ့သညျ။
သူတို့ကမိဘများသည်ကလေးများ၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိရန်နိုင်တော့မည်နိုငျသောအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာများနှင့်၎င်းတို့၏တစ်ရက်-to-နေ့ကလှုပ်ရှားမှုများအကြောင်းကိုသူတို့နှင့်အတူဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏ကလေးနှင့်အတူထိတွေ့အတွက်ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မိဘများကသူတို့ကလေးဝေးအပြာရောင် Whale ဂိမ်းနေနှင့်လိုအပ်လျှင်လည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပဌနာ, သို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါအထူးကုကိုသွားနိုင်ပါတယ်လုပ်သင့်ပါတယ်။
Previous Post:Цэнхэр халим тоглоом гэж юу вэ? 50 өдрийн сорилт (Suicide Game) татаж авах ба суулгах
Next Post:ब्लू व्हेल खेल के हो? 50 दिन चुनौती (आत्मघाती गेम) डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्